Fampiharana - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Inona avy ireo fakantsary oblique ampiasaina amin'ny fanaovana fanadihadiana sy GIS
Maninona no mampiasa fakan-tsary mihetsika ho an'ny Surveying & GIS
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fakantsary madiodio amin'ny fanadihadiana sy GIS
Fanadihadiana momba ny cadastral
Ny sary nalaina tamina fakan-tsary madiodio dia miteraka maodely 3D feno vahaolana sy an-tsipiriany amin'ireo faritra izay misy kalitao ambany, lany andro na tsy misy angona aza. Izy ireo dia mamela ny sarintany kadastraly avo lenta hamokatra haingana sy mora, na dia amin'ny sarotra na sarotra idirana amin'ny tontolo iainana. Ireo mpandrefy tany dia afaka mamoaka endri-javatra avy amin'ny sary, toy ny famantarana, sisin-dàlana, mari-pamantarana arabe, fantson-drano ary fantsona.
3D GIS dia manondro ny: 1) Manana tahadika manan-karena ny angona
3D GIS dia manondro ny: 2) Ny fitantanana tsirairay dia fitantanana mifantoka amin'ny zavatra
3D GIS dia manondro ny: 3) Ny zavatra tsirairay dia misy volo sy toetran'ny maodely 3D
3D GIS dia manondro ny: 4) Fanesorana mandeha ho azy ireo toetra ara-bakiteny
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fakantsary manjary madiodio amin'ny fanadihadiana sy GIS?
Ny fanadihadiana sy ny sarintany ary ny matihanina GIS dia mivadika haingana amin'ny vahaolana tsy mitonona ho olona sy 3D hanatanterahana asa tsara kokoa. Ny fakantsary madiodio Rainpoo dia manampy anao:
(1) Mitsitsia fotoana. Ny sidina iray, sary dimy avy amin'ny lafiny samihafa, dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fanangonana angona.
(2) Atsofohy ireo GCP (raha mitazona ny marina). Hahatanteraka ny mari-pahaizana amin'ny ambaratonga fanadihadiana amin'ny fotoana fohy, vitsy ny olona, ​​ary kely ny fitaovana. tsy mila teboka fanaraha-maso intsony ianao.
Ianaro ny fomba fampiasana fakantsary madiodio mba hanaovana fanadihadiana / sarintany / GIS raha tsy misy GCP>
(3) Atsaharo ny fotoana fanodinanao aorian'izay. Ny rindrambaiko manohana an-tsainay dia mampihena be ny isan'ny sary (Sky-Filter), ary manatsara ny fahombiazan'ny AT, mampihena ny vidin'ny modely ary manatsara ny fahombiazan'ny fivezivezena. (Sky-Target).
Ianaro ny fomba hanampian'ny rindrambaiko manohana anao hanavotra ireo fotoana aorian'ny fikarakarana. >
(4) Mijanona ho azo antoka. Mampiasà drôna sy fakan-tsary mihetsika mba hanangonana tahirin-kevitra avy any ambonin'ireo filed / trano, tsy vitan'ny miantoka ny fiarovana ny mpiasa, fa ny fiarovana ny drôna koa.